Anyanwụ nke Ọbara, nke Jo Nesbø dere. Nyochaa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Anyanwụ nke Ọbara, nke Jo Nesbø dere. Nyocha
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Emelitere na 20/11/2020 10:07 | Ndị edemede, Akwụkwọ, Black akwụkwọ
Ọbara ọbara bụ akwụkwọ ọhụụ kachasị ọhụrụ bipụtara ebe a Jo Nesbø. Ọ na-abịarute mgbe afọ anọ gasịrị ma ka ga-abịa Alaeze (Alaeze), nke ewepụtarala na Norway na obodo ndị ọzọ. Enwere m ike ịgụ ya mgbe ahụ nke a bụ nyocha m na-enweghị obere gbanwetụrụ mgbe agugharia ya. Maka ndị anyị bụ ndị na-enweghị nkwekọrịta nke Nesbọ ma gụọ ihe dị mkpa na ya. Na ndị na-adịghị.
Ana m edebe aha mbụ, N'etiti abalị Sun, gbanwere ebe a maka ihe kpatara nke marketing na mmekorita ya na ihe ozo di egwu saga nke vampires. Mana, n’eziokwu, echeghị m na ndị na-agụ ha abụọ ga-enwe mgbagwoju anya na ihe ha chọrọ ịgụ.
Ihe bụ eziokwu bụ na aha mbụ na-akọwapụta ebe, ihu igwe na mgbanwe na-aga n'ihu n'etiti ọchịchịrị na ọkụ nke protagonist na-eme, Jon hansen -ma ọ bụ Ulf, ka ọ na-akpọ onwe ya n'okpuru obere ọdịdị ya ọ pụtara dị ka nke dinta na-enweghị ntụpọ na nke na-enweghị ntụpọ — mgbe abịa na obere obodo furu efu north north kasị dị n ’ugwu niile.
N'ebe ahụ ọ na-ezute ma na-enwe mmetụta na ngwakọta nke ọkụ, ikuku, okwukwe, ekweghị na Chineke, ịnụbiga ọkụ n'obi ókè, mpụ, ụjọ, owu ọmụma, ọchịchịrị na nghọta na-adịru mgbe ebighi ebi nke etiti abalị ahụ n'etiti August, ụjọ, nnyefe, mgbapụta, ịhụnanya n'ụdị ya niile, ịbụ nne na nna, ọnwụ, ihe mgbu, enweghị olileanya na olile anya. Na nke a, ọ na-eme ka obodo emechiri emechi bi n'ime obodo ihe na-egbu egbu.
Hansen na-aga ịchọta Kpoo, nwoke iri, na nne-ya Lea, nwanyi nwere akụkọ onwe ya juputara na ihe nkiri na ihe ijuanya.
Ha kwuru nke ahụ, mana ha amaghị. Onweghi onye ma. Ọ bụghị m, ma ị bụghị, ọ bụghị onye nchụàjà, ma ọ bụ ekweghị na Chineke. Ọ bụ ya mere anyị ji enwe okwukwe. Anyị kwenyere, n'ihi na ọ ka mma karịa ịmara na ọ bụ naanị otu ihe na-eche anyị n'ime ala, nke ahụ bụkwa ọchịchịrị, oyi. Ọnwụ.
La ụgbọ elu Onweghi ebe Hansen bịakwara na njedebe. Anyị laghachiri na 70 nke XNUMX emeela ihe ejije Onye na-akụ azụ, nnukwu bigwig na Oslo mafia (mara na Ọbara na snow), ma ugbu a, ha na-aga maka ya. Ihe niile n'ihi enweghị ike ya, ma ọ bụ kama, n'ihi ya enweghị ike igbu. Ọ na-ewere onwe ya dị ka onye ụjọ, a ihe adighi nma na o mehiela ọtụtụ, ma ọ rute ebe ahụ n'akụkụ Arctic, ọ na-achọpụta na ọ nwere ike ịbụ ụzọ mgbapụ ikpeazụ ya.
Su mmekọrịta ya na ndi mmadu, ma karisie ya na Knut na onye na-achoputa ihe na nne ya echekwara mana o ghaghi amanye ya mee mkpebi otu ugboro. Ma ọ bụ wepụ aka kpam kpam.
Lee m, ahụrụ m gị n'anya. Tụfuo m ma ọ bụrụ na ị ga-eme ya, ọ bụrụ na i nwere ike. Anọ m ebe a iji nye gị aka m, lekwa m obi ịkụ aka m.
Ya mere, anyị ga-Jo Nesbø abụrụla nke kachasị mma. Ọ na-ede akwụkwọ akụkọ mpụ, ee, mana n'ime ala ọ bụ ya, ịhụnanya. Ma eleghị anya, ọ nwere ike ịbụ afọ, mkpa kọọ akụkọ dị mkpirikpi ma dị nkenke ikekwe maka onwe ya karịa maka onye na-agụ ya (onye mbụ na-akọ akụkọ dị mma maka nke ahụ), ma ọ bụ bụrụ echiche nwere banyere nkwenkwe na mmetụta. Mgbe ụfọdụ anyị chọrọ nke ahụ ma anyị ewere akụkọ maara nke ọma wee kọọ ya n'ụzọ nke anyị. Anyị amabakwala etu ụdị Mazị Nesbọ si dị.
N'otu aka na njedebe m na-atụ egwu ihe kacha njọ, mana ọ tụrụ m n'anya na ọ nwere ike ime ma emesịa Ọbara na snow. N'aka nke ọzọ, ihe ọzọ tụrụ m n'anya ọzọ ike na-agụrụ otu ihe nke na-aghọzi ihe ọzọ, ndị obinkoneelu nọgidere na-enwe ruo oge ikpeazụ, na mmetụ ahụ (onye ọ bụla gụrụ ya ga-echeta ọnọdụ ahụ dị egwu na eschatological na Ndị isi) na ebe a na-agakwu ihe gore na ihe ozo di egwu. Egosi: enwere ihe yiri ya na ihe nkiri a RobRoy.
Agụrụ m nke ahụ esiwo nro, onye na-enwe mmasị na onye mbụ nke ndị omekome nwere ezigbo ndụ, na nke ikpeazụ novelas ha karịrị akarị mkpụmkpụ o prediktebul ma ọ bụ akụkọ ifo na-enweghị ihe ọ bụla. Na kwa staunch nke Harry oghere, ndị na-eche na, ma e wezụga akụkọ ha, ndị ọzọ anaghị eme ka ha kwenye (Macbeth, Onye nketa…) Esi m na Hole ruo n’isi, mana onye dere ya bụ Nesbọ. N'ebe a na n'ọrụ ya niile ọ na-eguzosi ike na nkatọ ya na ọ na-ekwughachi ugboro ugboro: na ịhụnanya na ọnwụ bụ isi okwu nke ihe niile na-agbaso.
Ya mere, gịnị ka m ga-eme? Na-amasị m. N'oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » Anyanwụ nke Ọbara, nke Jo Nesbø dere. Nyocha
Nora Roberts akwụkwọ
Gaspar Melchor nke Jovellanos